एडमिरल पुतली - प्रकृति को सुन्दर सिर्जना
संसारको सबैभन्दा सुन्दर कीराहरू - निस्सन्देह, पुतली। यी नाजुक प्राणीहरू संधै तिनीहरूलाई पराउँछु गर्न बाध्य। सबै आकारहरू को प्रजाति सयौं, आकार र रंग हाम्रो ग्रह सजाउनु। यो प्रजाति को सबै भन्दा प्रमुख प्रतिनिधिहरु को एक पुतली एडमिरल छ। यो Nymphalidae परिवार पर्छ।
यो कीरा स्वीडिश naturalist कार्ल Linnaeus द्वारा पत्ता थियो। उहाँले छोरी Sheneya, पौराणिक नायक, छिटो चलिरहेको र असाधारण सौन्दर्य लागि प्रसिद्ध को सम्मान मा Atalanta पुतलीहरु यस प्रकारको भनिन्छ। यो सुन्दर पुतली एडमिरल को नाम यसको पखेटा मा स्थित, विस्तृत रातो धर्काहरू कारण थियो। रूसी नौसेना को एडमिरल्स द्वारा पहना को ट्राउजर मा नै उज्ज्वल धर्काहरू। एडमिरल पुतली उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजील्याण्ड, को द्वीप मा पाइन्छ अटलांटिक महासागर, ग्वाटेमाला र यूरेशिया मा।
एडमिरल पुतली, जो एक विवरण धेरै सन्दर्भ पुस्तकहरू, extraordinarily सुन्दर पाउन सकिन्छ। यसको पखेटा अप गर्न छ सेन्टिमिटर को एक अवधि छ। तिनीहरू कालो छन्। को पखेटा मा रातो धर्काहरू तारा, सेतो स्थलहरू जस्तै छरिएका बाहेक। लामो दूरी माथि पुतली पूरा सक्षम भएको पखेटा पहिलो नजर मा यी नाजुक।
एडमिरल पुतली - धेरै सक्रिय कार्यकर्ता। यी कीराहरू ठूलो बगाल मा यात्रा। आफ्नो बाटो युरोप बाट अफ्रीका छ। त्यहाँ तिनीहरूले अन्डा राख्नु र मर्छन्। केही समय पछि, अन्डा लाभ्रेकीरालाई देखिन्छन्। तिनीहरूले वयस्क नातेदार मेल हेर्न: पहेलो डट्स, धर्काहरू र ढाड संग, सेतो कालो, रातो, हरियो। तिनीहरूले नै बिरुवाहरु मा thistles र nettles र फिड मा बाँचिरहेका छौं। लाभ्रेकीरालाई, पुतलीहरु विपरीत, अलग बाँचिरहेका छौं। उनीहरू त्यहाँ रोल्ड nettle पात र pupate मा क्रल। नियम को रूप मा, पुतली pupae जुलाई को अन्त देखि व्युत्पन्न छन्। तिनीहरूले फल र रूख रुखको रस खान र फूल को मिठाई अमृत। तिनीहरूले एक सर्पिल proboscis जस्तै पर्याप्त लामो छन्। तिनीहरूले जो अन्य कीराहरू छैन बिरुवाहरु र खाना बाट पुतली अमृत, बाहिर।
सबैभन्दा पुतलीहरु गर्मी को दोस्रो आधा समयमा जन्म, शरद ऋतु तिनीहरू प्रकार, र त्यसपछि मर्न दक्षिण, पठाइएको छ।
युवा चरा आफ्नो मातृभूमि फर्केपछि छन्। अब तिनीहरूले एक्लै यस्तो कठिन र लामो यात्रा हटाउन छ। यसलाई आफ्नो गन्तव्य उड सक्छ सानो, नाजुक पुतली एडमिरल कल्पना गर्न कठिन छ। धेरै बाटो मा मर्छन्।
केही पुतलीहरु को जाडो लागि उड टाढा गर्न रुचाउँछु। यस मामला मा, तिनीहरूले शरद ऋतु उड, र केही अवस्थामा चिसो सम्म। को जाडो चिसो तिनीहरूलाई बचाउँछ छाल, चिसो प्राप्त गर्दैन गहिरो प्रायजसो खोंच। वसन्त को आगमन र गर्मी पुतलीहरु संग आश्रय देखि चयन गरिएका छन्। को मा सूर्य न्यानो गर्न flitting कीराहरू जंगल को किनारा, हावा देखि sheltered। कहिले काँही यो अचम्मको पुतली को burgeoning Meadow पाउन सकिन्छ।
फोटो कुनै पनि कलेक्टर को गर्व छ एडमिरल पुतली, सामान्यतया मा settles बगीचहरुमा। प्रशस्त मात्रामा तिनीहरूलाई गर्मी को दोस्रो आधा त्यहाँ पाउन सकिन्छ। तिनीहरूले हावा, प्ले मा सर्कल र sweetly overripe फल खुवाउन।
पुतलीहरु एक विशिष्ट सुविधा न्यानो पत्थर प्रेम छ। तिनीहरूले एक लामो समय को लागि तिनीहरूलाई बस्न सक्छ।
Burian - एक उर्वर भूमि आक्रमण
पत्थर: एम्बर - संरक्षकको स्वास्थ्य, आनन्द र सूर्य
तारे माछा खान कसरी र के: सुविधाहरू, वर्णन र रोचक तथ्य
सबै भन्दा ठूलो कीरा: एक विशाल छडी कीराहरूको
त्यो कहाँ बस्छ र के उहाँले आर्कटिक खरायो खाने?
गैंडा द्वारा Inhabited (कीरा)
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा भावना को संग्रहालय
उडान रंग संग परीक्षा पास गर्न प्रार्थना
युवा कलाकारहरूको गर्न सल्लाह: कसरी केटी अनुहारमा आकर्षित गर्न
के Breadmaker "Bork" सबै भन्दा राम्रो: मोडेल र आफ्नो तुलना समीक्षा
पोलिना गगरिना: ऊँचाई, वजन, उमेर। Pauline Gagarin को बारे मा दिलचस्प तथ्यहरु
संसारको "कन्टिनेन्टल" टायर को सिकेझैं?
जीव मा पाठ योजना। अनुसार यस GEF को आवश्यकताहरु संग विकास जीव पाठ,
ग्रीनल्याण्ड, जलवायु, जनसंख्या, शहर, झण्डा को क्षेत्र
राजकुमारी Budur गर्ने हो?